असारे बजेट | eAdarsha.com
१. असार पन्ध्रको निकट आइरहँदा जताततै धान रोपाइको माचो छ । कृषकहरु मानो रोपेर मुरी उब्जाउने कार्यमा व्यस्त छन् । बाढी पहिरो पनि चलेको छ । भौतिक संरचनाहरु भत्कीरहका छन् । जनधनको क्षति पनि भइरहेको छ । यो वर्षाको वेला हो ।
२. तर, यही बेला विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् । धमाधम सडक पुल पुलेसा बनाइदैछ । झम झम पानी परिरहेकै वेला पिच गरिरहेका दृष्या देखिन्छन् । के वर्षा निर्माणको काम गर्ने वेला हो ? होइन भने किन भइरहेका छन् ? केका लागि भइरहेका छन् ? सर्वत्र प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
३. १२ महिनामा ९ महिना हिउँद त्यसै जान्छ । अनि काम सुर हुन्छ असारमा आएर । त्यो पनि असार पन्ध्र भित्रै काम सक्नु पर्छ रे । झ्याप झुप,, ल्यापलुप उखानै बनेको छ । मध्यवर्षामा केको नाप ? के को जाँच ? रकम निकाल्यो बाँड्यो । असार कटाए त फेरि बजेटै ल्याप्स हुन्छ रे ।
४. जहिले पनि सरकारी काम असारमा आएर हुने कुराको बारम्बार विरोध हुँदै आएको छ । लोकतन्त्र आए पनि लुट तन्त्र रोकिएको छैन । झन् बढ्दै पो गएको छ । असार साउनमा निर्माणका काम न टिकाउ हुन्छ । उल्टै जमिनको क्षय भएर माटोसमेत बगेर जान्छ । यस्तो थाहा हुँदा हुदै पनि जब सरकार त्यही काम गरिरहन्छ अनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, लुट यही छ ।
५. समयमै बजेट निकास नहुने, टेण्डर नहुने र समयमै काम नहुने । काम सुरु भएपनि वर्षाको वेला काम रोक्नुपर्ने नरोकिने, जसरी पनि सक्नुपर्ने काम हो कि बजेट ? बजेट देशको विकासको लागि कि रकम निकासको लागि ? यस्ता विकृति विसंगतिकै कारण देश पछि परेको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा असारमै आएर खर्च हुन्छ । त्यो पनि निर्माणकै काममा ।